Filed under: ကဗျာလေးတွေ, စုံစီနဖာ — 19 Comments
သိဟ်ရာသီတွေရဲ့ နံနက်ခင်းလေးတစ်ခုက ကျွန်တော်ရဲ့ “သိဟ်ရာသီအော်ရီဂျီနေးရှင်း“(Leo Origination)လေ။ဆောင်းရာသီလို နှင်းမကျပေမယ်လဲ မိုးစက်တွေကြောင့် မြူတွေလိုဝေနေတဲ့ ဒီရာသီရဲ့ နံနက်ခင်းလေးတွေဟာ ချမ်းအေးနေပြီး နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ကလေးက တွက်ပေါ်လာရပေမယ့်လဲ သူရဲ့အနွေးဓာတ်ကလေးက သိဟ်ရာသီရဲ့ဝတ်ရုံကို လွှမ်းခြုံထားတဲ့ နံနက်ခင်းအအေးဒဏ်ကို ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်း မဲ့နေတယ်လေ။
ဆက်လက်ခရီးဆက်ဖို့ကိုပေါ့။နောက်ပြီး ကျွန်တော်သိတဲ့ ဘလောခ်ရေးသူတွေထဲမှ သိဟ်ရာသီရဲ့နောက်ထပ်ခရီးသည် ညီလေးတစ်ယောက် မွေးနေ့လေးပါ။ သူ့မွေးနေ့လေးအတွက် ဒီပိုစ့်မှာရေးထားတဲ့ကဗျာလေးက သူ့အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပါ။ဒီကဗျာနဲ့အတူ ကျွန်တော်သိပြီးသော၊ မသိသေးသော၊ နောင်သိလာတော့မည့် သိဟ်ရာသီဖွားသူတွေ အားလုံးကို ပျော်ရွှင်သော “သိဟ်ရာသီ ခရီးသွား“တွေ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ ရက်တူလတူသော အဆိုတော် မက်ဒေါနားရဲ့ အေးခဲမှု (Frozen)ကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ သိဟ်ရာသီထရိုင်မန်ရှင်းလေး (Leo Trimension)ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းလေးရဲ့ နှုတ်ဆက်မှု နိဂုံးလေးကတော့…………………………..။
>သိဟ်ရာသီဘွဲ့ကို လာဖတ်ပါတယ်၊သိဟ်ရာသီဖွား၊ နှစ်ဝါသားလေးက အတူတူရှိနေလား၊ ခြင်္သေ့တွေရဲ့ရင့်တဲ့လမှာမွေးတာပေါ့။သိဟ်ရာသီပန်းလေးကို ကိုယ်လည်းဒီမှာရေးထားတယ်။http://apyonepan.blogspot.com/2009/07/blog-post_22.html
>အစ်ကိုရေသိဟ်ရာသီ ခရီးသည်ကိုလာဖတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Leo ပဲခင်ဗျ။ ကြိုက်လို့ ကော်ပီကူးသွား ပါတယ် အစ်ကိုရေ။ ကျေးဇူးတင် ခင်မင်စွာဖြင့်
>မိတ်ဆွေတို့ထဲမှာ သိဟ်ရာသီဖွားတွေရှိရင်လဲ ရေးပေးသွားကြပါဦးလို့…..။သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ဒီပိုစ်လေးကတော့ သိဟ်ရာသီဖွားတွေအတွက်ပဲ သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ သိဟ်ရာသီခံစားမှု ပြခန်းလေးပါ။ မည်သူမဆိုဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။
>အကိုရေ ကဗျာလေး လာပို.တဲ.အတွက် ရောတကူးတက လုပ်ပေးတဲ. အတွက်ရောကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ … ညီကအကိုကို ပြောဖူးပါတယ် ညီကို မေဖွား ပါခင်ဗျ…မေ၈ ပါ "TAURUS" ဖွားပါ … ညီရေးတော.အလိုဘဲရေးထားတာပါ ဒါပေမဲ. "Leo" လို.ဖြစ်သွားတာပါ … ဘာအမှားရှိလို.လည်းတော.မသိပါဘူးအကိုလည်း မေဖွားလို.ညီက ထင်တာပါ … ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ အကို ကဗျာအကြောင်းလေးရောဗေဒင် အကြောင်းလေးတွေပါ ဖတ်ရတဲ. အပြင် ညီကိုပါ.ခုလိုတလေးတစား အမှတ်ရပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါအကိုအမှားအယွင်းရှိရင်တော. ညီအပြစ်ဘဲ ဖြစ်မှာပါ 🙂
>သိဟ်ရာသီဖွားကဗျာလေးကိုခံစားသွားပါတယ် အကိုရေရှင်းလင်းပြထားတာနဲ့ ကဗျာလေးတွေက အရမ်းကောင်းတယ်နော်ပျော်ရွှင်ပါစေ ခြင်္သေ့ကြီးနဲ့ ခြင်္သေ့သေးသေးလေးရေဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်နော်
>သိဟ်အကြောင်း သိကောင်းစရာတဲ့နောက်တစ်ခါ ကန်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာလုပ်ဦးဗျ။ ကိုချမ်းညီက ကန်ဆာနော်။ ဟဲဟဲ။ =P
>အကိုရေသိတယ်ဟုတ်သိဟ်ရာသီ ခြသေ့င်္မလေးကို…အကိုနဲ့တူနေတာပေါ့နော်…ကေသရာဇာခြသေ့င်္တွေရဲ့ ခရီးလေးကို သဘောကျပါတယ်။အကိုပို့စ်လေးမှာ စုံစုံလင်လင်လေးဖတ်ရတယ်…ကျေးဇူးနော်…အခု အတွေးတစ်ခုထပ်ရသွားတယ်…ခြသေံင်္တွေက စာရေးဆရာတွေ များတယ်နော်…ဘလော့ဂါခြသေ့င်္လေးတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်…
>အော်မေ့နေလို့ညီမချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါ မကေကလဲ လီယိုပဲသိလား…နှင်း
>သိဟ် ရာသီ ခရီးသည်အချိန်နာရီ ခရီးဝယ်မညည်းကွယ် တကယ်လျှောက်ဘယ်တော့မှ လမ်းမပျောက် ပါဘူး..လျှောက်သာလျှောက်…ေ၇ှ့ကို တည့်တည့်..
>ကိုချမ်း ကိုချမ်း သမီးက Sagittarius နော်။ ဒီရာသီဖွားလဲ လုပ်ပါဦးဗျာ။
>အလွန်လှသော အိမ်သစ်ဟာ ကိုချမ်းအိမ်လေးပါ။ မောင်ဝင်းကြည်ဘာတွေလုပ် နောက်ဖေး တကုတ်ကုတ်။တကုတ်ကုတ်နဲ့ မောင်ဝင်းကြည် ဟင်းတွေချက်နေသည်။ ကျက်လာရင် ကိုရေချမ်း အမုန်းဆွဲ မတဲ့လား။ ချောင်းမြောင်းနေသော လင်းကြယ်ဖြူ တပြုံးပြုံးနဲ့ကူ မောင်ဝင်းကြည့်ချက်သမျှ ဒိုင်ခံ တီးသတဲ့ဗျာ။။။။၀ါးးးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးး ဟားးးးးးးးးးးးးးးအိမ်သစ်လေး ကဗျာ လာစပ်တာဗျာ။အလုပ်ပေးထားတာ မေ့ပြီး ကိုချမ်းအိမ်ဘာလို့ ဝင်မရတာလဲ စဉ်းစားမရတာ… ခုမှ အဖြေတွေ့ သဗျ။။။ အရမ်းလှနေတယ် ကိုချမ်းရေ…. ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
>သိဟ်ရာသီအကြောင်းဖတ်သွားပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတဲ့အတွက် ကိုချမ်းကိုလေးစားပါတယ်။သိဟ်ရာသီဖွါး ဘလော့ဂါမောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေနော်။
>ကျွန်တော်လည်း မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့စ်လေး တင်ထားပါတယ်။ ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ကိုယ်တောင် သိဟ်ရာသီဖွားမဟုတ်လိုက်တာ ခံစားသွားရတယ် ဟဲဟဲ။
>ကိုချမ်းလင်းရေHappy Birthday ပါဗျာနောက်တောင်ကျနေပြီ :Dသိဟ်ရာသီဖွားတွေ အကြောင်းသေချာဖတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ရယ် နောက်ဘလော့ဂါညီမ နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နွေးနေခြည် မေဇင်တို့ကလည်း leo တွေပါပဲခင်မင်စွာဖြင့်သီဟသစ်
>၀ါခေါင်မိုးနဲ့ရောက်လာပါတယ်…သိဟ်ရာသီဖွားတွေအကြောင်းတော့ သိပြီကျွန်တော့်လို မေလဖွားအတွက်တော့ နောက်တနှစ်မှ သိခွင့်ရမယ်ထင်ပါရဲ့…။
>ကိုချမ်းရေကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ သိဟ်ရာသီဖွားဖြစ်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ ရာသီတူ အကိုအမ မောင်ညီမလေးတွေကို သိခွင့်ရလို့လည်း ၀မ်းသာပါတယ်။